Indlela yokuThengisa nge-imeyile: Sebenzisa oonobumba abakhethekileyo kwimigca yezihloko | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 23, 2012 NgoLwesine, Novemba 22, 2012 Itempile yaseLavon
Ngokujikeleza uSuku lweValentine kulo nyaka, ndiye ndaqaphela imibutho embalwa esebenzisa iintliziyo kumxholo wesifundo. (Kuyafana nomzekelo ongezantsi)
Ukusukela ngoko, ndizibonile ngakumbi nangakumbi iinkampani ziqala ukusebenzisa iisimboli kwimigca yezihloko zazo ukuze zithathe ingqalelo yomfundi. Sebenzisa oonobumba abakhethekileyo kumxholo wesifundo yenye yeendlela zangoku ze-imeyile kwaye imibutho emininzi sele itsiba ebhodini. Nangona kunjalo, ukuba awukabikho, zikho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuphumeza.
Okokuqala, kuya kufuneka unqume ukuba ngaba ukusebenzisa iisimboli kuyavakala kwinkampani yakho. Ukuba kunjalo, khangela ezona zimboli (ii) zilungileyo unokuzisebenzisa. Ukuba ungumthengisi, kunokuba sengqiqweni ukusebenzisa ilanga kumxholo wesifundo sakho xa uthetha ngolona hlobo lushushu kakhulu. Nceda uqaphele, ayizizo zonke iisimboli ezisebenza kubo bonke abathengi be-imeyile.
Njengayo nayiphi na into entsha, ufuna ukuqiniseka ukuba awuyigqithisi! Ngenxa yokuba yeyona yakutshanje kwaye inkulu, ngakumbi nangakumbi iinkampani ziya kuzama ezi. Oko kuthetha ukuba, umntu obhalisile kwi-inbox esele igcwele inokuba iya kuqala ukuba ipakishwe ngakumbi. Ufuna ukucwangciswa kwaye ungazisebenzisi kakhulu kwimigca yezifundo zakho apho umfundi wakho aqala ukulindela kuwe. Banokuqala ukuyiqaqambisa ukuba iya kuba nzima.
Hlala ubukele Ibhlog kaDelivra. Kungekudala siza kubhengeza ngokufutshane malunga nendlela yokusebenzisa oonobumba abakhethekileyo kumxholo wesifundo sakho ngempumelelo.
tags: Imigca yesifundo se-imeyileiisimboli ze-imeyileiimpawu
UGoogle uyangcwaba uMzi mveliso weSEO
Jul 27, 2012 ngo-5: 59 AM
Lo ngumbono omnandi kakhulu uLavon. Enkoso ngokwabelana.